Muwaadinkii labaad ee iswiidhish ah oo dalka Shiinaha lagu qabto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay onsdag 20 januari 2016 kl 16.58
Peter Dahlin, ahna muwaadin iswiidhish ah oo u ololeeya xuquuqda bani’aadamka oo lagu qabtay dalka Shiinaha ayaa lagu soo ban-dhigey idaacadda la iska daawado ee dalkaasi xalayto, halkaasina oo uu ka qirtay inuu dembiile yahay, isla-markaana cafis ka codsaday howlihii uu dalkaasi ka waday.
Barnaamij laga sii daayay idaacadda dalkaasi ee lagu magacaabo CCTV ayaa lagu eedeeyey Peter Dahlin inuu abuuray urur sharci-darro ku dhisan, midkaasina oo dalka ku faafinayay war-bixin aan dhab ahayn iyo sawir qalafsan iyo weliba inuu miisaaniyad geliyay howlo halis ku ah ammaanka dalka Shiinaha.
Peter Dahlin ayaa xabsiga loo taxaabay 4-tii bishan jannaayo oo eynu ku jirno, tallaabadaasina oo ka dambeeysay howlo lagu qaqabanayey dadyoowga u ololeeya xuquuqda bani’aadamka iyo qareemmo. Barnaamijka idaacadda laga sii daayay ee Peter Dahlin lagu hor-keeney ayuu sidan ka sheegay:
- Tallaabooyinka aan qaadey waxaan ku jebiyay xeerarka dalka Shiinaha u deg-san, waxaan dhaawac u geeystay dawladda dalka Shiinaha aniga oo sidoo kale ku tallaabsaday falal ey ka xumaadeen shacbiga Shiinuhu. Waxaan si kal iyo laab ah uga codsanayaa cafis falalka aan geeystay, waanan ka xumahay iney dhaceen.
Ururka Peter Dahlin ayaa ku tilmaamey dembiyada lagu soo eedeeyey iney yihiin kuwo aaney haba yaraatee waxba ka jirin oo la soo dhoodhoobey.
Falkan ayaa ahaa markii labaad ee gacanta lagu dhigo muwaadin iswiidhish ah muddo maalmo gudahood, isla-markaana la hor keeno idaacadda la iska daawado ee dalka Shiinaha. Muddo iminka dhowr maalmood ey ka soo wareegeen ayaa sidoo kale TV-ga la iska tusay wax lagu magacaabey qirasho ee soo saaraha buugagta
Gui Minhai, oo la tuhun-san yahay in laga soo af-duubey magaalada Bankook loona soo waaridey dalka Shiinaha, hase yeeshee barnaamijka idaacadda lagu sheegay inuu si mutadawac ah dib ugu soo laabtay dalka Shiinaha sidii uu ciqaabteeda u qaabili lahaa shil gaari oo dhacay sannadkii 2004.